लहरो तान्दा पहरो गर्जंदै – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
» पुल बगाएपछि आवतजावतमा समस्या
» यातायात व्यवसायीद्वारा दैनिक यात्रु लुटिदै : न्यूनतम भाडा १८ असुली २० !!!
काठमाडौं : बलिउडमा नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि लहरो तान्दा पहरो जाने अवस्था देखिएको छ। सुशान्तको निधनको कारण खोतल्दै जाँदा बलिउडका कलाकारले लागूऔषध सेवन गरेकादेखि सुशान्तको पक्षमा आवाज उठाउने कंगना रनावतको कार्यालयमा डोजर चलेको छ। यो घटना कुनै थ्रिलर फिल्मको कथाजस्तै ‘अब के पो होला’ भन्ने ढंगले अघि बढिरहेको छ।
कंगनाले महाराष्ट्र सरकारका गुन्डाहरू आफ्नो अफिस पुगेर तोडफोड गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनले ट्विटरमार्फत आफ्नो अफिस, अफिस मात्र नभएर राम मन्दिर भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो अफिसमा बारम्बार प्रवेश गरेको बताएकी छन्। कंगनाले बीएमसीविरुद्ध उच्च न्यायालयमा उजुरी पनि दिएकी छन्। विडम्बना कंगनाको पक्षमा कलाकार कम छन्।
पुल बगाएपछि आवतजावतमा समस्या
यातायात व्यवसायीद्वारा दैनिक यात्रु लुटिदै : न्यूनतम भाडा १८ असुली २० !!!
राष्ट्रिय गण्डकी म्यूजिक अवार्ड सम्पन्न
गायिका उषा मलाह ”सिम्रन“कोे ”मेरो सपना “ सार्वजनिक